Isiqandisi Evaporator Abenzi nabaphakeli - China seziqa Evaporator Factory
I-HA490 ingumkhiqizo wezinto zePolyolefin. Futhi le modeli ingachazwa njenge-EAA. Ifilimu eguquguqukayo enephepha elikhishiwe. Imvamisa abantu basebenzisa ububanzi obungu-48cm no-50cm ngosayizi 100 micron esiqandisini. I-HA490 ilungele ukuhlanganisa izindwangu ezahlukahlukene nezinto zensimbi, ikakhulukazi i ...
Ifilimu le-PO elishisayo lokunamathisela i-evaporator yesiqandisi
Ishintshiwe ifilimu ye-polyolefin eshisayo encibilikayo ngaphandle kwephepha eliyisisekelo. Ngokwehlukile kwesicelo samakhasimende nobuciko, ifilimu elishisayo elincibilikayo ngaphandle kwephepha elikhishwe nalo ngumkhiqizo owamukelekile emakethe. Le ncazelo ivame ukupakishwa ku-200m / roll bese igcwaliswa nge-bubble film ngephepha le-tube dia 7.6cm. ...
Iphronikhi elahlwayo ye-CPE
Le apron ye-CPE ingumkhiqizo esiwufaka emakethe ngokuya ngezidingo zamakhasimende athile aqondiswe emikhiqizweni. Ngalesi sizathu, sazakhela eyethu indawo yokusebenzela yokukhiqiza, sathenga imishini yokukhiqiza, futhi senza imikhiqizo esezingeni eliphansi, esezingeni eliphakeme ngentengo ephansi yezinto zokusetshenziswa. CPE yethu APR ...